सिता भण्डारीले न्या,य पाइनन् ? पैसाको ले,नदेनमा कुरा मिलेपछी ४६ दिन पछि यसरि भयो सीताको अ,न्तिम सं,स्कार (भिडियो हेर्नुहोस) – Complete Nepali News Portal
सिता भण्डारीले न्या,य पाइनन् ? पैसाको ले,नदेनमा कुरा मिलेपछी ४६ दिन पछि यसरि भयो सीताको अ,न्तिम सं,स्कार (भिडियो हेर्नुहोस)
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी २७ वर्षीया सीता भण्डारीको श,व ४६ दिनमा आफन्तले बुझेको छ । माइती पक्षलाई ११ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएपछि श,व उठेको हो । आ,त्मह,त्या गरेको भनिएकी सीताको मृ,त्युको विषयलाई लिएर आ,न्दोलन च,र्केपछि माइती पक्षले श,व उठाएका थिएनन् । आ,त्मह,त्या दुरु,त्साहन मु,द्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले मृ,तकका श्रीमान्, जेठाजु र आमाजूलाई पुर्प,क्षका लागि कारा,गार च,लान गरिसकेको छ ।
उनीहरुलाई कारा,गार च,लान गरेको करिब दुई साता बित्दा पनि माइती पक्षले आर्थिक ले,नदेनको विषयमा कुरा नमिल्दा श,व उठाउन मानेका थिएनन् । तर दुई पक्षबीच भएको छलफलमा ११ लाख माइती पक्ष,लाई दिने गरी सहमति भएपछि श,व उठाएर तिनाउको मगरघाटमा दाह,संस्कार गरिएको हो । स्रोतका अनुसार सीताका माइती पक्षले घरतर्फ अर्थात् पौडेल परिवारबाट ११ लाख रुपैयाँको चेक बुझेका छन् ।